Dhac nooc cusub ah oo ku soo kordhay magaalada Mogadishu oo la dhacayo mooto bajaajta… – Hagaag.com
Posted on 10 Diseembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Magaalada Muqdisho waxaa kusoo kordhaya dhac ay geesanayaan kooxo hubeysan oo qaarkood la sheego in ay yihiin askar katirsan ciidanka dowlada oo soo xirtay dharka shacabka .
Dhaca ay geestaan kooxaha burcada ah ayaa markii hore ku koobnaa moobeelada iyo alaabaha kale ee qaaliga ah ay wataan dadka wadooyinka maraya, waxa ayna burcadan inta badan marka ay dhaca geysanyaan adeegsadaan mooto bajaaj.
Hada magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanaya dhaca loo geesanyo mootooyinka bajaajta ee dhalinyarada ku shaqeestaan, waxaana kooxaha burcada ah si gaar ah u dhacaan una beegsadaan mootooyin cusub.
Burcada ayaa iska dhiga kuwa mootooyinka kireesanaya waxa ayna dhacaan marka ay la tagaan dhul cidlo ah, waxa ayna wadaha mootada ku qasbaan in uu furaha wareejiyo hadii kale la dhibaateenayo.
Mudooyinkii ugu dambeeyay Muqdisho waxaa dhac loogu geestay mootooyin badan, waxaana dadka laga dhacay mootooyinka qaarkood loo geestay dilal iyo dhaaacyo halka kuwa kalana laga qaatay mootooyinka iyaga oon dhibaato la gaarsiin.
Mootooyinka la dhaco oo ah kuwa cusub ayaa la sheegaa in qaarkood gobolada dalka loo dhiibo lagana bixiyo lacago ka yar inta ay joogaan mootooyinka caadiga ah halka kuwa kalana mootooyinka la dhaco laga badalo rinjiga iyo sidoo kale taargada .
Dhalinyarada Bajaajta ku shaqeesata ayaa ka walaacsan dhacan kusoo kordhay magaalada Muqdisho, waxa ayna dhalinyarada qaarkood sheegeen in aysan kala garaneyn burcada dhaceysa iyo rakaabka ay qaadayaan.
Dhaca loo geesanayo mooto bajaajta ayaa hadii aan wax laga qaban laga cabsi qabaa in ay keento in dhalinyaro badan iska dhigaan mootooyinka ay hada nolol maalmeedka uga raadiyaan qoysaskooda.